Semalt सुझावहरू: कसरी एक विश्वसनीय पार्टनरमा तपाईंको SEO काम आउटसोर्स गर्ने
एसईओ एक दीर्घकालीन रणनीति हो जुन मुख्य रूपमा रचनात्मक र प्राविधिक तत्त्वहरूको प्रयोग गरेर साइटको दृश्यता बढाउने लक्ष्य राख्दछ। SEO मा, सामग्रीको गुणवत्ताले धेरै फरक पार्छ। प्रयोगकर्ताहरूलाई गुणवत्ता र ताजा सामग्री वितरणको फ्रिक्वेन्सीले पनि महत्व राख्दछ। एसईओ एजेन्सीहरूको एक राम्रो संख्या उनीहरूलाई डिजिटल मार्केटिंग कार्यहरूको ख्याल राख्न विशेषज्ञहरू राख्नु पर्छ।
तपाईंको साइटको एसईओ आउटसोर्सिंग महत्त्वपूर्ण चरण हो। त्यो दिमागमा, ओलिभर किंग, Semalt का ग्राहक सफलता को निर्देशक, एक SEO पार्टनर भाँडामा जब तपाईं उठ्नु पर्छ प्रश्नहरूको सूची तयार गरेको छ।
a) तपाईं कसरी लिंकहरू प्रयोग गरेर प्रयोगकर्ता संलग्नता सिर्जना गर्नुहुन्छ?
प्रयोगकर्ता संलग्नता सिर्जना गर्न अधिक लिंकहरू प्राप्त गर्नु आवश्यक आवश्यकता हो जब यो एसईओको कुरा आउँछ। तपाईंलाई निश्चित रूपले एक पार्टनर चाहिन्छ जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई तपाईंको सामग्रीमा निर्देशित गर्न सक्दछ, र प्रतिस्पर्धी ब्लगहरू र डाइरेक्टरीहरू सिर्जना गर्नमा विशेषज्ञता छ। तपाईंको एसईओ अभियान पार्टनरलाई काममा लिनु अघि, पछिल्लो नमूनाहरू सोध्नुहोस् जुन तपाईं आफैंमा राख्दै हुनुहुन्छ भन्नेमा निश्चित हुन।
ख) तपाईं गुगल र वास्तविक प्रयोगकर्ताहरूको लागि उपयोगी सामग्री कसरी सिर्जना गर्नुहुन्छ?
एल्गोरिदम र खोज अप्टिमाइजेसनको लागि उपयुक्त सामग्रीको सिर्जना स्पष्ट रूपमा हाइलाइट गरिनु पर्छ। तपाईंको सामग्री तपाईंको सम्भावित साइटहरू र गुगलका आगन्तुकहरू राम्रोसँग प्राप्त हुनुपर्छ। जब तपाइँको एसईओ अभियानमा काम गर्नको लागि पार्टनर खोज्दै हुनुहुन्छ, पार्टनर खोज्नुहोस् जसले भिडियो-आधारित सामग्री उत्पन्न गर्न सक्दछ र जसमा ग्यालरीहरू समावेश छन्। अघिल्लो नमूनाहरू अनुरोध गर्नुहोस् निश्चित गर्नुहोस् कि उनीहरूले तपाईंलाई खुवाइरहेका जानकारीहरू वैध छन्।
c) तपाइँ कसरी तपाइँको एसईओ अभियान को प्रगति ट्रैक गर्नुहुन्छ?
एसईओ एक दीर्घ-अवधि रणनीति हो जसले लगानीकर्ताहरूलाई दीर्घकालीन फाइदाहरू प्रदान गर्दछ। पार्टनरमा तपाईंको एसईओ काम आउटसोर्सिंग छोटो अवधिमा एल्गोरिदममा उच्च स्तर निर्धारणमा आधारित हुनु हुँदैन। एक साझेदार किराया जो रूपान्तरण दर र बिक्री को उपयोग गरी तपाइँको SEO अभियान को सफलता को माप।
d) तपाइँ तपाइँको कुञ्जी खोज सर्तहरू कसरी छनौट गर्नुहुन्छ?
तपाइँको एसईओ अभियानमा डिल गर्न कुञ्जी खोज सर्तहरू निर्धारण पूर्ण हुनुपर्दछ। तपाईंको उद्योगमा आधारित कुञ्जी खोज शब्द छान्नुहोस्। तपाईंको SEO अभियानको लागि उत्तम एक फेला पार्नको लागि कुञ्जी खोज सर्तहरूको लागि परीक्षण प्रस्ताव गर्ने पार्टनरसँग काम गर्नुहोस्।
e) नयाँ अभियानमा लिंक गरिएको खोजी सर्तहरू कसरी तपाईं अप्टिमाइज गर्नुहुन्छ?
तपाइँको एसईओ कार्य एजेन्सीलाई आउटसोर्स गर्नु अघि, यो जान्नु राम्रो हुन्छ कि SEO सबै ठाउँको बारेमा हुँदैन। एक SEO पार्टनर भाँडा लिनुहोस् जसले नयाँ अभियान र उत्पादनहरूको लागि खोजी सर्तहरू अनुकूलन गर्न सक्दछ।
f) तपाईं नियमित रूपमा मूल सामग्री उत्पादन गर्न सक्नुहुने एक पार्टनर कसरी प्राप्त गर्नुहुन्छ?
एसईओको पहिलो महिनामा धेरै काम समावेश हुन्छ, धेरै रिपोर्टहरू र लिंकहरू व्यवहारमा राखिन्छन्। पहिलो दुई महिना पछि, केहि पार्टनरहरूले तपाईंको एसईओ अभियानको लागि धेरै थोरै गरिरहँदा धेरै डलर चार्ज गर्छन्। एक पार्टनर भर्ना गर्नुहोस् जसले नियमित रूपमा सामग्री उत्पादन गर्न सक्दछ, तपाईंको अभियानको लागि अधिक लिंकहरू उत्पन्न गर्न र तपाईंको प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछ्याउनुहोस्।
g) तपाइँको एसईओ अभियान को उपलब्धी के हो?
प्रतिक्रिया एसईओ को लागी धेरै महत्त्वपूर्ण छ। तपाईं ठूलो सफलता पाउन सक्षम हुनुपर्नेछ, जुन अनलाइन बिक्री र आकर्षक रिपोर्टमा वृद्धि द्वारा रेखांकित गरिएको छ।
पार्टनरमा तपाईंको एसईओ काम आउटसोर्सिंग एक प्रक्रियागत प्रक्रिया हो जुन राम्रो परिणामहरू प्राप्त गर्न राम्रोसँग कार्यान्वयन गरिनु पर्छ। एक पार्टनर भाडामा लिनुहोस् जसले वास्तविक समयमा वास्तविक सामग्री सिर्जना गर्न सक्छ र तपाइँको एसईओ अभियानको अनुसरण गर्न सक्दछ। माथि छलफल गरिएका प्रश्नहरूले तपाईंलाई काम गरिरहेको पार्टनरको प्रकार परिभाषित गर्न मद्दत गर्दछ।